Hafnium Silicide, HfSi2 - Goodao Technology Co, Ltd.
Hafnium silicide imhando yeshanduko yesimbi yesilide, inova irudzi rwekufungidzira kwakabatana. Nekuda kweayo akasarudzika epanyama uye emakemikari zvivakwa, Hafnium silicide yakave yakabudirira kuiswa muminda yeyekuwedzera simbi oxide semiconductor zvishandiso, yakatetepa firimu kupfeka, hombe dhizaini mamodule, magetsi emagetsi zvinhu, thermoelectric zvinhu uye photovoltaic zvinhu. Iyo nano zvishandiso inoratidza yakasarudzika magetsi, optical, magnetic uye thermoelectric zvivakwa, uye kunyangwe iine mukana wekushandisa kukosha mumunda we catalysis.
Izvo zvimiro zve hafnium disilicide
Hafnium silicide imhando yeshanduko yesimbi yesilide, inova irudzi rwekufungidzira kwakabatana. Nekuda kweiyo yakasarudzika yemuviri nemakemikari zvivakwa,
Hafnium silicide yakashandiswa zvinobudirira muminda yeyekuwedzera simbi oxide semiconductor zvishandiso, yakatetepa firimu kupfeka, hombe dhizaini module, magetsi emagetsi zvinhu, thermoelectric zvinhu uye photovoltaic zvinhu.
Iyo nano zvishandiso inoratidza yakasarudzika magetsi, optical, magnetic uye thermoelectric zvivakwa, uye kunyangwe iine mukana wekushandisa kukosha mumunda we catalysis.
Zvimiro zve hafnium disilicide
Icho chigadzirwa chine kuchena kwakanyanya, diki size saizi, kugoverwa yunifomu, yakakura yakatarwa nzvimbo nzvimbo uye yakakwira nzvimbo chiitiko.
Zvishandiso zvedongoCeramic zvigadzirwa, kugadzirwa kwemhando dzakasiyana tembiricha inodzivirira zvinhu uye zvinoshanda zvikamu.
Kushandiswa kweHafnium silicide mukugadzirira zvinhu
1. Kugadzirira kweSiC - hfsi2 - TaSi2 anti ablation composite coating. Carbon fiber yakasimbiswa kabhoni (C / C) inoumbwa nemhando nyowani yepamusoro-soro tembiricha inoshingairira zvinhu zvine kabhoni fiber sekusimbisa uye pyrolytic kabhoni se matrix. Nekuda kwesimba rayo rakanyanya kupisa-tembiricha, kuramba ablation uye kupesana kwakanaka uye kupfeka zvivakwa, mukutanga kwema1970, United States yakaita basa rekutsvaga pazvikamu zveC / C zvezvivakwa zvinopisa, izvo zvakaita kuti zvikamu zveC / C zvisimuke kubva kupisa zvinhu zvekudzivirira kupisa kune izvo zvinopisa masisitimu. Sezvinhu zvinopisa zvekuvaka, C / C zvinoumbwa zvinogona kushandiswa muzvinhu zvinoumba gasi turbine injini, yemhino koni kiyi yemuchadenga inofamba, kumberi kwepapiro, nezvimwe zvizhinji zvezvinhu izvi zvinoshanda mune yakanyanya tembiricha uye oxidation nharaunda.
Nekudaro, macomputer eC / C ari nyore kuisa oxidize uye haigone kushandiswa mumhepo yekusanganisa pamusoro pe400 ℃. Izvi zvinoda yakakodzera anti-oxidation dziviriro yeC / C chinoumbwa, uye kugadzirirwa kweanti-oxidation yekupfeka ndiyo imwe yematanho makuru ekudzivirira. Mhedzisiro yacho inoratidza kuti kuramba kweablation kweC / C zvinoumbwa kunogona kuvandudzwa kana Zr, HF, Ta, TiB2 nezvimwe zvinokanganisa simbi zvinowedzerwa mukabhoni matrix. Kuti unzwisise simba reHF neTA pane zvinyoronyoro zveC / C zvinoumbwa, SiC - hfsi2 - TaSi2 anti ablation coating yakagadziriswa nekumisikidza nzira. Kuita kwekudzora kwekupfeka kwakayerwa neiyo oxyacetylene ablation chishandiso.
2. Kugadzirira kweiyo organic electroluminescent mudziyo. Izvo zvinosanganisira anode, mwenje-unoburitsa mwenje, cathode uye kavha yekuvhara iyo inoputira mwenje-inoburitsa mwenje uye iyo cathode pane anode, iyo yekuvhara kavha ine silicon nitride dura uye chipingamupinyi dura rakaumbwa pamusoro pesilicon Carbide rukoko; izvo zvinhu zvechigadziko chinosanganisira silicide nesimbi oxide, uye iyo silicide inosarudzwa kubva kuchromium silicide, tantalum disilicide, Hafnium silicide, titanium disilicide uye disilicide Iyo simbi oxide inosarudzwa kubva ku magnesium oxide, aluminium oxide, titanium dioxide, zirconia, hafnium dioxide uye tantalum pentoxide. Hupenyu hweiyo organic mwenje inoburitsa chishandiso chakareba. Iyo yekugadzira inopawo nzira yekugadzirira ye organic electroluminescent mudziyo.
3. Kugadzirwa kweSi Ge alloy yakavakirwa thermoelectric element. Iyo SiGe yakavakirwa thermoelectric element inoumbwa neiyo electrode layer, iyo SiGe yakavakirwa thermoelectric layer uye chipingamupinyi chepakati pakati peiyo electrode layer uye iyo SiGe based thermoelectric layer. Iyo yekumisikidza dara musanganiswa wesilicide uye nesilicon nitride, uye iyo silicide ingangoita imwe ye molybdenum silicide, tungsten silicide, cobalt silicide, nickel silicide, niobium silicide, zirconium silicide, tantalum silicide uye Hafnium silicide. Iyo interface yeiyo silicon germanium alloy yakavakirwa thermoelectric zvinoriumba zvakasungwa zvakanaka, hapana kutsemuka uye pachena kupararira kwechiitiko kunowanikwa pane iyo interface, iyo yekudzivirira kuramba iri diki, iyo yekushisa yekudyidzana nyika yakanaka, inogona kumira kwenguva refu-yepamusoro-tembiricha yekumhanyisa bvunzo . Uye zvakare, nzira yekugadzirira ine zvakanakira maitiro akareruka, kuvimbika kwakanyanya, mutengo wakaderera, hapana chakakosha michina uye inokodzera kugadzirwa kukuru.
4. Rudzi rwekupisa kwakanyanya kusagadzikana uye anti-oxidation cermet composite bemhapemha yakagadzirirwa. Firimu rinoumbwa rinozivikanwa nerekuti kupfeka kunoumbwa nesimbi isingabvumirwe, inogadziriswa carbide uye mukomboni yemubatanidzwa, uye ukobvu hwekuputira iri 10 μ m ~ 50 μ M. Iyo simbi inogadziriswa ndiyo imwe kana inopfuura molybdenum, tantalum, zirconium uye hafnium; Refractory carbide inoumbwa nesilicon carbide uye imwe kana kupfuura tantalum carbide, zirconium carbide uye hafnium carbide; iyo intermetallic remubatanidzwa inoumbwa neimwe kana yakawanda ye molybdenum silicide, tantalum silicide, zirconium silicide, Hafnium silicide, tantalum carbide, zirconium silicide uye hafnium carbide; iyo yekristaro chimiro chekupfeka chinoumbwa neamorphous uye / kana polycrystalline nanoparticles.
Pashure: Tungsten Silicide, WSi2
Zvadaro: Niobium Silicide, NbSi2
Yakasarudzika zvinhu Hafnium silicide Fekitori
Yakasarudzika zvinhu Hafnium silicide Mugadziri
Hafnium silicide Mafekitori
Hafnium silicide Fekitori
Hafnium silicide Mugadziri
Hafnium silicide Vagadziri
Hafnium silicide poda Mutengo
Hafnium silicide Mutengo
Hafnium silicide Quotes